Nezvedu | Hangzhouqiangwei zvipfeko CO., LTD
Hangzhouqiangwei zvipfeko CO., LTD
Hangzhouqiangwei zvipfeko Co., Ltd.iri muGuta rakanaka reHangzhou, Zhejiang Province. Iyo yakavambwa mu1997 ine yakanyoreswa capital yemamiriyoni gumi nerimwe emamiriyoni euan. Anopfuura maseti mazana matanhatu emidziyo, uye akashongedzerwa nemidziyo yekupfeka inoenderana (yakadai se: yekumhanyisa-yekumhanyisa yekucheka muchina, yekunamatira lining muchina, iyo United States magetsi shear). Yakagadzirwa kuva seti yekugadzira, kugadzira, kutengesa seimwe yehunyanzvi hwekutakura ekugadzira emabhizinesi. Iyo kambani ine vashandi vanopfuura mazana matanhatu, ine nzvimbo yepasi yemakiromita zviuru gumi emamirioni uye yegore yekugadzira inokwana mamirioni 1,2 seti. Imwe kambani yakagadzikawo pasi pefekitori yekushongedza, mbatya dzisiri - ironing factory.
Kambani yawana yakasarudzika yevashandi yekuchengetedza zvipfeko zvekuchengetedza chiratidzo cheState Administration yeBasa Chengetedzo uye rezinesi renyika maindasitiri ekugadzira zvigadzirwa, Zhejiang Safety Production Supervision Administration, uye zvipfeko zveZhejiang Economic uye Trade Commission zvakasarudzwa kugadzirwa chitupa. Iyo zvakare iri bhangi kiredhiti AAA bhizinesi uye ISO9001 yemhando system chitupa kambani. Iyo manejimendi manejimendi modhi iri kuwedzera kuve yakasanganiswa uye yakaenzana.
Iyo "BASA" dzakateedzana dzehunyanzvi kupfeka dzakaburitswa nekambani ine hunhu hweabrasion kuramba, kushambidza kuri nyore, uye yakasimba color kukasira. Taura yazvino zvipfeko zvepasi rese CAD software system yehunyanzvi dhizaini. Mukugadzirwa kwacho, nyatsoteedzera zviyero zvemunyika zve "GB 12014-2009 Anti-static Clothing" uye "GB 8965.1-2009 Flame Retardant Clothing".
Zvigadzirwa zvekambani zvinotumirwa kunzvimbo dzese dzenyika uye pamatanho ese ehupenyu. Yakadzokorora kakawanda zvitaera zvakasiyana zvembatya dzehunyanzvi kumakambani angangoita chiuru uye epakati-masimba musimba, peturu uye petrochemical, simbi, kugadzira mota, njanji chiteshi, fodya nemamwe maindasitiri. Mutengi kurumbidzwa.